Doorashada Hindiya: Hal qoys oo 115 cod leh. – idalenews.com
Waxaa laga yaabaa in ay u muuqato wax lala yaabo laakiin, waxaa jira qoys u dhashay wadanka India gobolka bariga wadankaasi ku yaala ee Bihar oo leh ugu yaraan 115 cod bixiyaal oo ku wada nool hal guri oo qudha.
Mana adka in la helo guriga ay ku nool yihiin qoyska Chandel oo ku yaala caasimada Patna agagaarka Lohanipur .
Afar awoow, qoyskani wuxu daganaa dhismo wayn oo leh labo guri oo midkiiba ka koobanyahay afar dabaq oo xayn-daab ah
Waxaa caado noqotay doorashadan, in ay la kulmaan Ururada siyaadda iyo hoogaamiyaasha booqanaya deegaankaasi.
Qoyskan oo leh awooda ah 150 xubnood oo ay sideed kamid ahi markii ugu horaysay ay codaynayaan, waxay markasta la kulmaan dad raadinaaya codkooda tan iyo intii lagu dhawaaqay doorashooyinka hal bil ka hor.
” Waxaan imid magaaladan sanadkii 1954 tii. Waxaana u umid waxarashada heerka jaamacadeed. Halkan ayaan dagay ka dib, markii aan shaqo ka helay dawlada” Sidaasi waxaa yiri Parshuram Singh Chandel, oo ah ninka reerka caaqilka u ah.
Qoyskan qoysaska ka duwan, ama layaabka leh, waxa uu leeyahay caado uu raacijiray sanado badan.
Doorasha kasta haweenka reerka, ayaa baxayay oo marka hore codkooda soo dhiibanayay.
Sidaa daraadeed, 50 haweena iyo 65 raga ah, oo xaq u leh in ay codeeyaan , waxay ku noqotay maalin dheer qoyska reer Chandel maalinta cod bixintu.
Xubnaha ka tirsan qoyskan la yaabkale, waxay ku farax sanyihin sheegashada ah in ay u codeeyaan is ku hal qof ka dib, markay ku heshiiyaan doorashada ka hor .
“Waxaan u codayndoonaa dawlada balanqaada in ay wax ka qabanayso horumarinta” Sidaasi waxaa yiri, Arun Kumar oo caruuriisu ay sanadkan gaadhay in ay codka dhiibtaan
Xubnaha qoysku waxay sheegeen, in tirada badan ee qoysku ay ka dhigayso mid aad u adag in cunada dhamaantood hal meel loogu wada kariyo.
“Beero qodashada ayaa wali ka sii socota tuulada ay ka soo jeedaan awowayaalkeen waana mid fiinac oo ku filan in laga sameeyo dhawr meelood oo wax lagu kariyo. Laakin gurigayaga ayaa wali ah meel cidhiidhi ah.” Sidaas waxaa yiri isaga oo dhoola cadaynaya Parshuram Singh.
Laakiin, qoysku waxay ka niyad jabsanyihiin in aanay helin Kaadhadhkii aqoosniga ee cod bixinta dhawr dumara oo dhawaan la soo guursaday. Kaadhakan ayaa looga baahanyahay qofka codka dhiibanaya in uu Idia u dhashay oo uu in diya joogo..
Qoysas balaadhan oo isku meel ku nool, India kuma yara, gaar ahaan deegaanada ka baxsan magaalaayinka waawayn ee toolooyinka ah.
Laakinn, qoys kaliya oo leh in kabadan boqol ruux oo codaynkara waxay noqotay waxa soo jiidatay qof kasta oo u tartamaya kursiga.
Doorasooyika guud, ayaa hada ka dhacaaya wadanka India, cod bixintuna waxay socondoontaa shan todobaad, sababtoo ah arimaha amaanka iyo loo jistikada awgood.
In ka badan sideed boqol oo qof, ayaa u qalma in ay ka qayb qaataan codbixinta doorashadan, waxayna dooranaya 543 kuri oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka. afartan korsi oo kamida kuraasta baarlamaanka waxaa laga dooranayaa gobolaka aan hurmarsanayn ee Bihar waxaana la aaminsanyahay in ay yihiin muhiim.